Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Sergio Reguilon Childhood Akụkọ gbakwunyere Ezigbo Ihe Ndị E Dere Ndụ
Akụkọ ndụ anyị Sergio Reguilon na-agwa gị Eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, ndị nne na nna, ezinaụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka ọ bụrụ, Net Worth, Web na Life.
N'okwu doro anya, anyị na-ewetara gị usoro ịkọwapụta eziokwu nke gosipụtara ihe ndị dị mkpa na Memoir nke Left-azụ malite na mgbe ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ onwe gị sie ike, nke a bụ oge ọ bụ nwata rue ụlọ okenye - nchịkọta zuru oke nke Sergio Reguilon's Bio.
Akụkọ ndụ nke ndị na-agba ọsọ na Spanish.
Ee, onye ọ bụla maara ọ ghọrọ otu n'ime aka ekpe kachasị mma na LaLiga (oge 2019/2020), ọkachasị na-agbaso nnukwu ego mgbazinye na Sevilla.
Agbanyeghị, ọ bụghị ọtụtụ ndị Fans agụla akụkọ ndụ Sergio Reguilon's Life History nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a na-ebutụbeghị mbụ, ka anyị bido na akụkọ mmalite oge nwata ya.
Sergio Reguilon Childhood Akụkọ:
Maka ndị na-ebido Biography, ekpe-azụ nwere aha otutu "Regui". Sergio Reguilón Rodríguez a mụrụ na 16th ụbọchị nke ọnwa 1996 maka nne na nna ya Mr na Mrs Ildefonso na obodo Madrid, Spain.
A mụrụ ndị na-agba ọsọ n'ime ezinụlọ ya dị ka nwa nke abụọ, mgbe nwanne nwoke gasịrị (Deigo).
Nwatakịrị "Regui" nwere obi ụtọ n'oge ọ bụ nwata na Madrid, isi obodo na obodo ndị mmadụ kacha biri na Spain. Dika nwatakiri, o nwetara aha nwata dika “Ardilla” nke putara dika Osa.
Dị ka aha ya, obere Reguilon nwere ihe maka ịrịgo ọkụ n'okporo ámá, osisi na ihe ọ bụla "na-arị elu".
Ezigbo ezinụlọ nke Reguilon:
Agbanyeghi na amụrụ na Madrid, Left-Back enweghị agbụrụ ya site na isi obodo Spanish.
Mgbe anyị nyochachara nke ọma, anyị ghọtara na nne na nna Sergio Reguilion nwere ezinụlọ ha sitere na Zamora. Obodo Spanish dị n'okpuru ebe a bụ kilomita 130 ma ọ bụ 210 kilomita site na Madrid.
Sergio Reguilon Family bụ nke mgbọrọgwụ Zamorian ..
Dị ka Wikipedia si kwuo, Spaniard bụ naanị onye ama ama ama ama ama ama ama ama okpon ye ubon esie ke ekpri obio.
Sergio Reguilon Ezigbo Ezinụlọ:
"Regui" dị ka a na-etu ya n'oge ọ bụ nwata, bụ nwa nwere obi ụtọ nke nwere ncheta na-atọ ọchị banyere oge mbụ ya na ndụ ezinụlọ ya.
Eziokwu bụ, onye na-agbachitere abụghị ngwaahịa nke ụlọ gbawara agbawa na mmasị nne na nna ya maka ịzụlite ya na Madrid na-egosi n'eziokwu na ezinụlọ ya - kachasị njọ - ụmụ amaala etiti.
N'ihi ya, ndị nne na nna Sergio Reguilon bụ ndị nwere ike inye nwa ha ihe ndị dị ya mkpa n'oge ọ bụ nwata.
Sergio Reguilon Football Akụkọ:
Akụkọ banyere mgbe mbụ nwatakịrị ahụ na bọl adịghị iche na ụmụaka nwere nrọ nke igwu egwuregwu ahụ dị ka ndị ọkachamara.
Ọ bụ ezigbo onye nkwado Real Madrid dị ka nwatakịrị wee malite igwu egwuregwu bọọlụ mpaghara CF Collado Villalba dị ka 5 afọ.
Ọ malitere ọrụ ya na football na Collado Villalba -AS.
Mgbe ọ nọ na Villalba, Sergio Reguilon mụtara ka o kee eriri akpụkpọ ụkwụ ya na mgbakwunye na isi egwuregwu ndị ọzọ. Ọ bụ obere ma precociously ike. Na mgbakwunye, Reguilon nwere ike na usoro dị iche na ndị ọgbọ ya.
Ná ngwụsị nke oge 2005/2006, Reguilon bụ otu n'ime ndị ghọrọ ndị so na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Real Madrid. Villalba hapụrụ ya, ọ nọrọ ọtụtụ afọ na mmepe ya na ndị otu ya.
Sergio Reguilon Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Ọnwa ole na ole mgbe ụbọchị iri na asatọ gachara, onye na-agba ọsọ ọsọ na-aga UD Logrones (otu Segunda Division B club) na-achọ inweta oge igwu egwu. N'ụzọ dị mwute, ọ na-anọdụkarị n'oche.
N'ihi ya, ọ laghachiri Real wee malite igwu egwu maka oghere Los Blancos (na nke atọ).
Reguilon gakwara UD Logrones Na oge na-esote ma bụrụkwa otu n'ime XI ha oge niile. Ihe mgbaru ọsọ ya maka mkpọsa ahụ bụ 8 na ọtụtụ enyemaka.
Sergio Reguilon Bio - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
N'ịlaghachi na ụlọ nne na nna ya, "Regui" nyere ọtụtụ ohere igwu egwu site n'aka onye nkụzi mbụ Santiago Solari, na-ekpuchi ihu 30 ma na-eje ozi dị ka onye isi otu B maka oge 11.
N'oge na-adịghị anya tupu e ziga ya na Sevilla na mbinye ego ebe onyinye ya hụrụ ka ọgbakọ ahụ bulie trophy 2019-20 UEFA Europa.
Kedu ihe ọzọ, arụmọrụ ya na mkpọsa ahụ rụpụtara ya ntuli aka La Liga kacha mma aka ekpe azụ.
Ọsọ dị n'ihu n'oge edere Bio a, Sergio Reguilon dị ka Eric Garcia, na-achọ ndị isi otu.
O meere onwe ya aha ma hapụ ya ka Real mee ka a mara atụmatụ ha maka ya n'ọdịnihu.
Dị ka Ferran Torres, o yikarịrị ka ọ ga-abanye n'òtù egwuregwu kachasị elu n'oge na-adịghị anya. Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu na Reguilon, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Banyere Nwanyị Nwanyị Sergio Reguilon na Nwunye ka ha bụrụ:
E wezụga ịhụ ihe ọ na-eme na pitch n'anya, aka ekpe na-enwe mkpakọrịta nke otu nwanyị.
Ọ bụ Nwanyị Nwanyị Sergio Reguilon Marta Diaz. Nwanyị ahụ bụ onye TTuber ma mara mma na nke ahụ.
Zute Sergio nwanyị mara mma Sergio Reguilon.
Na-achọgharị site na akwụkwọ ozi nke aka ekpe nke Instagram, o doro anya na ya na enyi ya nwanyị gara ezumike na Dubai na August. O doro anya na ha dị n'ezigbo mma, o nwere ike ịbụ di na nwunye.
Ndụ ezinụlọ nke Sergio Reguilon:
Ezinụlọ bụ ogidi aka ekpe nke nkwado. Ọ na-eji ha akpọrọ ihe ma na-ebu ọdịmma ha n'obi. Anyị na-ewetara gị eziokwu gbasara nne na nna Sergio Reguilon.
Ọzọkwa, a ga-ekpughere eziokwu banyere ụmụnne ya na ndị ikwu ya iji nyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma.
Banyere Sergio Reguilon Nna:
Nnukwu nna mepụtara ndị na-agba ụkwụ na-aga nke ọma na Ildefonso abụghị otu. Nna Reguilon nyere aka na ịrị elu ya na football.
Ọ bụ ụdị nke na-anaghị akwụsị inwe mmasị na mmepe nke ọrụ ọkachamara nwa ya nwoke.
Onye na-agbachitere ahụ hụrụ ha n'anya n'otu oge were Instagram mee emume nna ya n'oge ememe ụbọchị nna.
Foto nwata bụ Sergio Reguilon ya na nna ya na-akwado ya.
Banyere nne mama Sergio Reguilon:
Dị ka di ya, Oriakụ Ildefonso bụkwa nke Zamoran mgbọrọgwụ dị ka Wikipedia na-akwado. Agbanyeghị na enweghị ọtụtụ akwụkwọ banyere nne Sergio Reguilon, agbanyeghị, anyị ji n'aka na ọ kwadoro na nne nke ya.
Banyere Nwanna Sergio Reguilon:
"Regui" nwere nwanne nwoke aha ya bụ Diego. Nwanne nwanne dị ka a hụrụ n'okpuru ebe a buru ibu ma yie ka okenye karịa ọkachamara bọọlụ.
Ọzọkwa, ọ dị ka Diego Reguilon enweghị akara nke ịghọ pro dịka nwanne ya nwoke.
Obi abụọ adịghị ya, Sergio Reguilon bụ onye na-elekọta ezinụlọ ya. N'ikwu nke a, Diego kwesịrị ịdị mpako maka ihe nwanne ya nwoke ghọrọ.
Sergio Reguilon Ndụ Nke Onwe:
Abilitydị mmasị bụ okwu na-ekpuchi nkọwa kachasị mma maka ndị ịgba ọsọ.
Ọ bụ enyi ọtụtụ ndị na-esonyere ya n'ihi ịrụsi ọrụ ike ya, ịdị umeala n'obi na ikike iji soro ndị mmadụ na-akpakọrịta nke ọma.
Mgbe amamịghe bọọlụ anaghị enye ọzụzụ ma ọ bụ na-akwụsị ndị na-eti ihe, enwere ike ịhụ ya na-enwe ezumike, na-egwu egwuregwu vidio, na-ekiri ihe nkiri na mmasị na ihe omume ntụrụndụ ndị ọzọ.
Neti na Neti Sergio Reguilon:
Spaniard dịtụ ọhụụ na bọlbụ elu elu. Nke a na-eme ka ọ na-achọ ihe siri ike iche n'echiche akụ na ụba ya dị ka nke ndị ọzọ egwuregwu bọọlụ.
N'aka ozo, onu ogugu nke na-egosi oke onu ahia Sergio Reguilon na 2020 pere mpe. Iji kọwaa ya nke ọma, anyị agafeela ịtụle ụgwọ ọnwa Sevilla.
Kwa Afọ € 2,064,000 £ 1,853,616 $ 2,439,863
kwa ọnwa € 172,000 £ 154,468 $ 203,323
Kwa Izu € 39,631 £ 35,592 $ 46,949
Kwa .bọchị € 5,661 £ 5,085 $ 6,693
Kwa elekere € 235.9 £ 211.9 $ 279
Kwa Nkeji € 3.9 £ 3.5 $ 4.6
Sekọnd € 0.06 £ 0.05 $ 0.08
Na ikpe site na nyocha na ozi anyị sitere na isi mmalite, anyị nwere ike ịsị na Sergio Reguilon bara uru naanị 2.5 Nde Euro ma nwee isi mmalite akụ na ụba ya bụ ụgwọ ọnwa na ụgwọ.
Nkwenye na Nkwado bụ ihe ndị ọzọ na - enye akụ na ụba ya nke na - enyere ya aka ịkwado ndụ okomoko ya nke ịkwọ ụgbọ ala mara mma na ibi na nnukwu ụlọ ma ọ bụ ụlọ.
Eziokwu Sergio Reguilon:
Iji mechie Bio nke aka ekpe anyị, nke a bụ eziokwu a na-amaghị ama banyere ya.
Eziokwu # 1 - Salary na mmekọrita na Nkezi Spanish Citizen:
You maara?… Ọ ga-ewe nkezi Spanish ka ọ na-agbanye 6 afọ na ọnwa 1 iji nweta euro 172,000, nke bụ ụgwọ ọnwa Sergio Ruguilon na Sevilla FC. Chọta n'okpuru, ego ọ na-enweta kwa sekọnd.
Nke a bụ ihe Sergio Reguilon akwụla ụgwọ kemgbe ị malitere ilele ibe a.
Eziokwu # 2 - A Pro Gamer:
Dabere na Ousbọchị ọmụmụ, Sergio Reguilon abụghị naanị ndị ịgba ọsọ bọọlụ, mana ọ bụ onye na-egwu egwuregwu.
Na May 2019, aka ekpe hapụrụ aka na eSports squad Team Heretics nke dabere na Spain. Ndị otu ahụ gosipụtara ndị egwuregwu ama ama dịka Goorgo na TheGrefg.
Eziokwu # 3 - Habọchị Obi Hatọ nke Ndụ nke Ndụ:
Sergio Reguilon na Gareth Bale na-ese foto na afọ 2014, ụbọchị ọ kwupụtara onye kacha nwee obi ụtọ n'oge ọ dị afọ iri na ụma. Hụ obere ọ dị na ole o gbanwere n'ime afọ ole na ole mgbe duo ahụ gbara ọzọ.
Eziokwu # 4 Okpukpe Sergio Reguilon:
Okpukpe ekpe nke ekpe ka ga-arụrịta ụka n'oge edere. Agbanyeghị, ọ hụrụ ya mgbe ọ na-ese foto n'akụkụ alakụba n'oge ezumike ya na nso nso a na Dubai. Lee foto dị n'okpuru.
Sergio Reguilon na ụlọ alakụba Sheik Zayed.
Eziokwu # 5 FIFA ọkwa:
Dị ka onye agbachitere ya, Achraf Hakimi, Sergio Reguilon nwere nnukwu atụmanya na FIFA. N'aka ekpe azụ FIFA FIFA 2020 niile bụ akara 80 nwere ikike nke 87 isi.
Fans kwenyere na ya kwesịrị inweta akara karịa Luke Shaw onye Man United chọrọ ka ya dochie anya dị ka a hụrụ na 2020/2021 nyefe gossips.
Ntụle ya dị mma mana ọ nwere ike ịka mma.
Eziokwu # 6 Hụnanya maka ndị ọkụ ọkụ:
Sergio Reguilon gaara abụ onye na-enwu ọkụ ma ọ bụrụ na ebughi n'uche ebumnuche ịbụ ọkachamara n'ịgba ọsọ. Ọ hụrụ ọrụ ahụ n'anya ma na-ahụ ndị ọkụ ọkụ dị ka ndị dike.
Daalụ ịdị mma ya nwere ihe ịga nke ọma na bọl. Anyị enweghị ike iche n’echiche ịhụ ya uwe mwụda ọkụ.
Anyị nwere ebe a, nchịkọta nke profaịlụ Sergio Reguilon.
Aha n'uju Sergio Reguilón Rodríguez
aha otutu "Regui"
Ụbọchị ọmụmụ 16th December 1996
Ebe amụrụ onye Madrid na Spain
Egwuregwu Aka ekpe
Ndị nne na nna Ildefonso (nna)
Nwanne Diego (nwanne)
enyi nwanyị Marta Diaz
omume ntụrụndụ ezumike, igwu egwuregwu vidio, ikiri ihe nkiri
Ngwakọta Net Nde Euro 2.5
elu 5 ụkwụ 10 sentimita.
Daalụ maka ịgụ ihe omimi Bio nke Sergio Reguilon. Anyị nwere olile anya na o meela ka ị kwenye na nkwekọ dị oke mkpa iji mezuo ebumnuche gị.
Dị ka e mere na Memoir anyị, Reguilon enweghị ụdị ọ bụla furu efu agbaala mbọ ịmasị ya kemgbe ọ bụ nwata dị ka ndị ịgba egwu bọọlụ.
Na Lifebogger, anyị na-akwado nkwado dịka okwu nche anyị n'inweta akụkọ egwuregwu bọọlụ dịka nke Sergio. Jiri obiọma dobe okwu n'okpuru banyere echiche gị banyere Spanish Footballer.